Fandaharam-pianarana fanadinana bakalorea »Hodges University - Fandraisana
Sokajy: Mari-pahaizana licence
Manomboha amin'ny mari-pahaizana momba ny mpianatra any amin'ny oniversite Hodges
Ny mari-pahaizana bakalorea ao amin'ny University of Hodges dia natao hanomezana anao ireo lalam-piofanana ilaina amin'ny indostria mba hananganana ny fahaizanao nefa mandingana ny mari-pahaizana fototra ilaina amin'ny mari-pahaizana na bakalorea. Ho fanampin'izany, ny mari-pankasitrahana ataonay dia aterina 100% an-tserasera ary ahafahanao mivezivezy haingana amin'ny programa ary manome ny fototra ilaina hahombiazana amin'ny asanao safidy. Manolotra mari-pahaizana licence amin'ny:
Business (Bookkeeping, fitantanana risika, fanomanana hetra)
Teknolojia famolavolana (Sarimiaina, AutoCAD, Famolavolana sary, sy ny traikefan'ny mpampiasa / tranonkala)
Teknolojia fandraharahana (Rindrambaiko momba ny tranokala, eDiscovery / eLitigation, Fandraisana an-tanana ny e-book)
Teknolojian'ny informatika (Fanohanana amin'ny birao fanampiana, fanohanana teknolojia fampahalalana, tambajotra informatika)
Ireo mari-pankasitrahana ireo dia mitondra trosa ihany koa, koa raha manapa-kevitra ny hamita ny mari-pahaizana ianao dia afaka mampiditra mari-pankasitrahana amin'ny mpiara-mianatra na bakalorea amin'ny daty ho avy.
Mifandraisa amin'ny mpanolo-tsaina momba ny fidirana hiresaka momba ny safidy ara-bola. Ny mari-pankasitrahana sasany dia Core + 4 mahafeno fepetra (izay ahafahanao misoratra anarana amin'ny fotoana feno, mandray ora 16 amin'ny vidin'ny 12), Lohateny IV azo ekena, na mety amin'ny vatsim-pianarana.
Ampiharo ankehitriny, ary avelao izahay hanampy anao hanana ny fahaiza-manao ilainao hivoatra!
Colleges an-tserasera nahazo fankatoavana: Colleges an-tserasera miisa 25 ho an'ny famolavolana sary
Fanamarinana momba ny asa - Vaovao
Fanomanana ny hetra
Tongasoa eto amin'ny Hodges University Business Certificat. Ny mari-pankasitrahana momba ny raharaham-barotra dia mety raha toa ianao ka mila kilasy voafaritra indostrialy ilaina hananganana ny fahaizanao nefa mandingana ny mari-pahaizana fototra ilaina amin'ny diplaoma mpiara-miasa na bakalorea.
Ny mari-pahaizana momba ny asa aman-draharaha dia atolotray 100% an-tserasera, azo vitaina haingana, ary manomana anao amin'ny fahaizana sy fahalalana ilainao hipetrahana amin'ny fanadinana fanamarinana mifandraika amin'ny indostria. Mba hitazomana ny takatry ny taratasy fanamarinana, manolotra ny programa CORE + 4 izahay ahafahanao misoratra anarana mandritra ny fotoana feno, mandray ora 16 amin'ny vidin'ny 12. Plus, azonao atao ny mahazo famatsiam-bola Lohateny IV.
Avelao izahay hanampy anao hanomboka anio!
Ny Taratasy fanoratana momba ny Bookkeeping dia ho an'ireo izay mitady toerana fidirana ho mpitahiry bokim-boky na maniry ny hiasa amin'ny fahafaha-miasa irery manompo orinasa kely sy salantsalany. Ny filaharam-pianarana dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny Fikambanam-pirenena mpikarakara bokim-panjakana voamarina (NACBP) ary manomana ny mpianatra ho an'ny Mpiambina bokim-panjakana voamarina (CPB) fanadinana fahazoan-dàlana, mari-pahaizana eken'ny firenena.
Ny fampianarana ho an'ny programa Bookkeeping dia misy:
Fampidirana ny kaonty fitantanam-bola sy fitantanana
Ity taratasy fanamarinana ity dia ao anatin'ny programa CORE + 4 ahafahanao misoratra anarana mandritra ny fotoana feno, mandray ora 16 amin'ny vidin'ny 12. Ny fampianarana rehetra takiana dia atolotra 100% an-tserasera amin'ny endrika TEC, manome anao ny fahafaha-mianatra amin'ny fotoananao , amin'ny hafainganao.
Ny Certificate Management Risk dia mari-pankasitrahana amin'ny crédit natao ho anao hahazoana ambadika ankapobeny amin'ny fitantanana risika sy fiantohana. Ny fahaiza-mianatra ianaranao dia mihatra amin'ny toeran'ny fiantohana sy ny indostrian'ny serivisy ara-bola.
Ny taratasy fanamarinana ny fitantanana ny risika dia misy kilasy amin'ny:
Fiantohana ara-bola sy fiantohana manokana
Fiantohana manokana sy orinasa
Ho fanampin'izany, ny trosa azo tamin'ity taratasy fanamarinana ity dia azo afindra tanteraka amin'ny programa mari-pahaizana momba ny diplaoma Associate na Bachelor ao amin'ny Johnson School of Business. Ny fahazoana an'io taratasy fanamarinana io miaraka amin'ny diplaoma dia mety mahafeno ny fepetra takiana amin'ny State of Florida momba ny fahazoan-dàlana ho an'ny Resident Health and Life Agent (jereo ity URL manaraka ity)
Ny Taratasy fanomanana ny hetra dia ho an'izay liana amin'ny laharam-pahamehana amin'ny maha-mpanomana hetra ho an'ny mpikirakira hetra isam-batan'olona na kely, na ireo mitady asa-tena hanompoana orinasa kely sy salantsalany. Ity programa ity dia mahafeno ny fepetra takian'ny fanabeazana an'ny Tolotra iraisam-pirenena (IRS) ary manomana ny mpianatra ho an'ny Fandinihana ny fisoratana anarana manokana (JEREO) takiana mba ho lasa Agnatera misoratra anarana miaraka amin'ny IRS. Ny Agent Enrolled dia matihanina amin'ny hetra izay manomana fandefasan-ketra ho an'ny olona sy mpandoa hetra amin'ny orinasa ary afaka misolo tena ireo mpandoa hetra ireo alohan'ny IRS.
Ny fampianarana any amin'ny taratasy fanomanana ny hetra dia misy:
Hetra miditra amin'ny tsirairay
Kaonty federaly I sy II
Famantarana mari-pahaizana momba ny haitao
Ity taratasy fanamarinana ity dia natao hanomanana ny mpianatra amin'ny toerana fidirana ho Animation Designers miasa amin'ny sary mihetsika lava toy ny sora-baventy ara-barotra, an-tranonkala, sary mihetsika ho an'ny môdely tranokala, na sary mihetsika fohy fohy ho an'ny fampisehoana. Mampiasa ny isa amin'ny 20 plus izahay Adobe Creative Cloud fangatahana hamoronana ny tetikasa farany.
Ohatra amin'ny tetikasa sasany azonao atao:
Mampiasà Animate, XD, ary Dreamweaver hamoronana tranokala matihanina ho an'ny orinasa eo an-toerana.
Ampiasao ny Adobe Premiere sy Aftereffects hamoronana horonantsary fohy tsy ahazoana tombony.
Mampiasà Adobe Photoshop, Illustrator, ary Indesign hamoronana rebrands ho an'ny tetikasa manokana.
At 9 ora-trosa fotsiny, mety afaka mahavita an'ity taratasy fanamarinana ity ianao ao anatin'ny herintaona latsaka!
Ny AutoCAD Certificate dia mamaky ireo mpianatra amin'ny toerana fidirana ho teknisianina CAD. Mahazoa ny fahalalana ilainao miasa ho toy ny Drafter 2D na 3D ao amin'ny indostrian'ny Architectural, Engineering, Construction, na Healthcare. Ny mari-pahaizana voaangona ao amin'ity taratasy fanamarinana ity dia azo ampiharina amin'ny diplaoman'ny mpiara-miasa na bakalorea ao amin'ny Hodges University.
Ny fanabeazana ao amin'ny AutoCAD Drafting Certificate dia misy fahaiza-manao sary sy sary mihetsika 2D sy 3D toa ny:
Saripika azo ampiasaina
Ireo vondrom-piarahamonina drafitra master
Sarintany rafitry ny rafitra fampahalalana jeografika
Ianao koa mety afaka fenoy io taratasy fanamarinana io ao anatin'ny herintaona latsaka!
Famokarana famolavolana sary
Ity taratasy fanamarinana ity dia mamaly anao amin'ny laharana fidirana a Mpanonta Desktop Design Desktop mampiasa ny fampiharana fototra an'ny Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, ary Indesign) manangana sy mitantana rafitra marika. Ho fanampin'izany, ianaro ny fomba fampiharana ireo fotopoto-pitsipika marina momba ny famolavolana hiresahana mahomby sy fandefasana hafatra amin'ny marika manomboka amin'ny famolavolana nomerika voalohany ka hatramin'ny famokarana ara-batana.
Ity taratasy fanamarinana ity dia mety ho an'ireo izay maniry ny hanana fototra amin'ny famolavolana sary nomerika, nefa tsy mandray ny fandaharam-pianarana fototra takiana hahazoana diplaoma. Ireo lohahevitra rakotra dia ahitana:
Famolavolana nomerika avy amin'ny Sketch mankany amin'ny Production Professional
Mampivelatra ny fahatakarana ny fitsipika Grid
Ahoana ny fomba fampifangaroana ny foto-kevitra Grid miaraka amin'ny hierarchie Visual
Mamokatra endrika fifandraisana mahomby amin'ny vokatra na serivisy
Ity taratasy fanamarinana ity dia ora 24 ary mety ho vita ao anatin'ny herintaona. Ny mari-bola azo dia azo afindra amin'ny mari-pahaizana na bakalorea ao Hodges U.
User Experience (UX) sy Web Design
Ity taratasy fanamarinana ity dia mampifangaro ny fototry ny kaody sy ny fitsipiky ny famolavolana valin-kafatra mahomby, miaraka amin'ny fahatakarana ny fomba hitondrana ny foto-kevitrao amin'ny fiainana avy amin'ny sary masiaka. Raiso ny torolàlana amin'ny lohahevitra toy ny:
Fampidirana ny Multimedia
Animation Digital sy ny effets amin'ny Internet
Famolavolana tranonkala I, II, ary III
Famolavolana amin'ny karazany
Mianara teknika famolavolana mamaly amin'ny alàlan'ny fampiharana farany indrindra ao amin'ny Indostria ao amin'ny Adobe Creative Cloud, fa tsy mandray ny fandaharam-pianarana fototra takiana amin'ny diplaoma. Mila solosaina ianao ary Famandrihana Adobe CC ho an'ity programa fanamarinana manokana ity. Amin'ny ora-trosa 21, ity taratasy fanamarinana ity dia mety ho vita ao anatin'ny herintaona. Rehefa vita soa aman-tsara, ny UX sy ny Web Design Certificate dia azo ovaina amin'ny diplaoma na mari-pahaizana bakalorea ao Hodges U.
Taratasy fanamarinana teknolojia
E-Discovery / Litigation
Ity taratasy fanamarinana ity dia mampifangaro ny famolavolana programa, fampiharana, ary fampandrosoana finday sy fampiharana miaraka amina foto-kevitra momba ny injeniera momba ny lozisialy, ary ny fahalalana momba ny fitantanana ny tetikasa manomana anao amin'ny fototra ilaina amin'ny asa amin'ny famolavolana sy fampandrosoana.
Ity taratasy fanamarinana ity dia mety ho an'ireo izay maniry ny fahalalana nefa tsy mandray ny fandaharam-pianarana fototra takiana amin'ny mari-pahaizana momba ny fampandrosoana lozisialy. Anisan'izany ny fampianarana:
Hevitra momba ny programa sy ny programa Java
Fampiharana fampiharana finday
Ny mari-pahaizana e-Business Ventures dia mety manomana ireo mpianatra handrafitra, hitantana, hanara-maso ary hivarotra fisian'orinasa an-tserasera mampiasa fahaizana ampianarina amin'ny taranja toy ny:
Fitantanana orinasa kely sy fandraharahana
Media sosialy sy fiaraha-miasa
Ity programa ity dia tsara ho an'ireo mitady hahatratra ny mari-pahaizana ilaina amin'ny asa marketing dizitaly tsy mandray ny fandaharam-pianarana fototra takiana amin'ny diplaoma. Amin'ny ora-trosa 21, ity taratasy fanamarinana ity dia mety ho vita ao anatin'ny herintaona ary, rehefa vita soa aman-tsara, dia azo afindra amin'ny diplaoman'ny mpiara-miasa na bakalorea ao Hodges U.
Ity dia mari-pahaizana tsara indrindra ho an'ireo izay maniry mahatakatra ny ara-dalàna tafiditra amin'ny fanaovana orinasa amin'ny tontolo elektronika miovaova ankehitriny. Ny fampianarana dia miresaka momba ny lohahevitra toy ny:
Data Privacy sy ny fampiasana ny haino aman-jery sosialy
eFiling sy eLitigation
Amin'ny ora credit 15 fotsiny, ity taratasy fanamarinana ity dia azo raisina mandritra ny herintaona ary mety hafindra amin'ny Bachelor amin'ny Fianarana ara-dalàna (na mari-pahaizana licence hafa) ao Hodges U.
Fanamarinana teknolojia fampahalalana momba ny informatika
Manam-pahaizana momba ny tambajotra
Fanohanana amin'ny birao fanampiana
Ny mari-pahaizana momba ny Support Desk Support dia mety indrindra ho an'ireo izay mitady toerana avo lenta amin'ny IT. Ny taratasy fanamarinana mifangaro ny fampiroboroboana ny fitaovana, ny rafitra miasa ary ny tamba-jotra, miaraka amin'ny fanohanan'ny mpampiasa sy ny fahaiza-miasa amin'ny birao fanampiana hanombohana miasa eo amin'ny sehatry ny haitao. Raiso miaraka miaraka amin'ny fanamarinana ny indostriao amin'ny A + sy ny Net +. Anisan'izany ny fampianarana:
A + Hardware I sy II
Fanomanana Lab + fanamarinana
Network CompTIA + fanomanana fanamarinana
Fampandehanana ny mpampiasa sy ny birao fanampiana
Ilaina amin'ny tambajotra
Amin'ny ora adiresy 18 fotsiny dia azo alaina ao anatin'ny herintaona latsaka ity taratasy fanamarinana ity ary mety hafindra amin'ny diplaoma mpiara-miasa na bakalorea ao Hodges U.
Fanohanana teknolojia fampahalalana
Ity taratasy fanamarinana ity dia mamaky anao amin'ny fahaiza-manao ilaina amin'ny toerana fidirana amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny IT. Foto-kevitra toy ny:
Fampiharana birao ifotony
Tambajotra sy fifandraisan-davitra
Ity programa ity dia tsara ho an'ireo mitady mahazoa fahaizana ho an'ny mari-pankasitrahana indostrialy ao amin'ny A + sy Net + miaraka amin'ny taratasy fanamarinana, fa tsy mandray ny fandaharam-pianarana fototra takiana amin'ny diplaoma. Amin'ny ora-trosa 24, ity taratasy fanamarinana ity dia mety ho vita ao anatin'ny herintaona ary rehefa vita soa aman-tsara dia azo alefa amin'ny diplaoma mpiara-miasa na bakalorea ao Hodges U.
Ity taratasy fanamarinana ity dia miorina amin'ny fahaiza-manao tambajotra fototra hanomanana anao amin'ny toerana mitaky fahaizana manokana momba ny tambajotra amin'ny fitantanana sy ny fitazonana ny tontolon'ny tambajotra marobe.
Ny mari-pahaizana momba ny Networking Specialist dia tsara indrindra ho an'ireo izay maniry ny hahazo mari-pahaizana momba ny indostria ao amin'ny A +, Net +, CCENT, CCNA, Linux +, ary Servers Windows telo miaraka amin'ny taratasy fanamarinana, nefa tsy mandray ny fandaharam-pianarana ilaina ho an'ny diplaoma.. Anisan'izany ny fampianarana:
A + Hardware I sy II miaraka amin'ny prep Certification Lab
Fikirakirana sy fifandraisana amin'ny tambajotra
Tambajotra miaraka amin'ny Windows Server
Zava-dehibe ny fitaterana & famindrana